warkii.com » Hey,ada mukhaadaraadka Hindia oo 5 Ruux uxirtay kiisa daroogada Sushant lagudilay, Rhea Wali dad ayaa dhiman ayee leedahay!!!
Hey,ada mukhaadaraadka Hindia oo 5 Ruux uxirtay kiisa daroogada Sushant lagudilay, Rhea Wali dad ayaa dhiman ayee leedahay!!!
Xafiiska xakameynta mukhaadaraadka (NCB) ayaa hada baaraya kiis daroogo ah oo la xiriira dhimashadii Sushant Singh Rajput. NCB waxay xireen shan qof ilaa iyo hada oo ay kujirto atirishada Rhea Chakraborty. Sabtidii, mas’uuliyiintu waxay xireen dhowr qofoo kale oo lala xiriirinayo kiiska. Kadib Rhea Chakraborty,
Dadka la qabtay oo lagu eedeenayo kiiska dilka sushant ayaa lagu kala sheegay Karamjeet Singh Anand, Dywan Anthony Fernandes, Ankush Arenja, iyo Chris Costa. Sida la sheegay, Dywan waxaa laga qabtay Dadar waxaana laga helay 500 garaam oo daroogo ah . Ankush ayaa la sheegay inuu Karamjeet ka helay koontarabaan sidoo kalena uu siiyay Anuj Keshwani. 42 garaam iyo lacagta kabadan 1 Cror
NCB waxay hawlgallo ka sameeyeen Mumbai iyo Goa iyadoo lagu saleynayo macluumaadka uu bixiyay Anuj Keshwani. kadib markii Kaizan Ebrahim uu shaaca ka qaaday magaciisa inuu yahay qeebiyaha daroogada. Kaizan waxaa la rumeysnaa inuu la xiriiray Rhea Chakraborty walaalkeyd Showik Chakraborty. Karamjeet ayaa la sheegay inuu daroogo u keenay Sushant Singh Rajput isaga oo u sii mariyay cunta kariyihiisa iyo maareeyaha Samuel Miranda.
Sida ku xusan warbixinnada, NCB waxay xiri doonaan dad badan maalmaha soo socda. Dhanka kale, Rhea, Showik, Miranda, Sawant, Vilatra iyo Parihar ayaa ku jira gacanta garsoorka kadib markii dalabkoodii dammaanad ay diiday maxkamad jimcihii.